Turkiga oo dunida u diray baaq ku aadan caawinta Soomaaliya. | Somsoon
Home WARAR Turkiga oo dunida u diray baaq ku aadan caawinta Soomaaliya.
Turkiga oo dunida u diray baaq ku aadan caawinta Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa dowladaha iyo shacuubta islaamka ugu baaqay in ay gacan weyn ka geestaan caawinta dadka Soomaaliyeed ee la dhibaateysan fatahaadda wabiyada Jubba iyo Shabelle.
Wasiir ayaa hadalkaan ka jeediyay shir ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya kaas oo ka qabsoomay magaalada Doxa ee dalka Qatar.
“Waa inaan meel iska dhignaa khilafaadka dhexdeena ah isla markaana aan qaadanaa mowqif mid ah si Soomaaliya loogu soo dabaalo nabad iyo barwaaqo, beesha caalamka waxaan ugu baaqeynaa inaysan ildhaha ka laaban dhibaatada ka jirta Soomaaliya” ayuu wasiir Mevlüt Çavuşoğlu.
Waxaa uu soo hadal qaaday dib u dhiska ciidanka Qaranka Soomaaliya waxaana uu sheegay wasiirka in dowladiisu ay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay garab ku siineyso la dagaalanka argagixisada.
Article horeSheikh Shaakir: “Diyaar uma nihin dagaal uu wiil nooga dhinto ama ku dhaawacmo”
Article socoda Farmaajo iyo Kheyre oo la kulmay madax ka socotay Bankiga Aduunka